Iindaba -Ungayikhetha njani uMpheki oLungileyo
Uyikhetha njani i-Cooker elungileyo
Ngaba aba bapheki bamaxabiso aphezulu ngokwenene kulula ukuba basebenzise kuneemveliso eziqhelekileyo ezinamakhulu ee-yuan? Kutshanje, abathengi abaninzi baxele kwiphephandaba lethu ukuba ezinye zezinto ezibizwa ngokuba ziphezulu kunye nesibhakabhaka ezinexabiso eliphezulu zokupheka empeleni akukho lula ukuzisebenzisa, kwaye ifuthe lokusetyenziswa lahluke mpela kubuxoki bomenzi.
Ixabiso lezinto zokupheka eziphezulu ziyaqhubeka nokunyuka, kwaye ezinye iimveliso ezinexabiso eliphezulu akukho lula ukuzisebenzisa. UNks Wei, ohlala kwiSithili sase-Hexi esixekweni, uxelele oonondaba ukuba uthenge ipani yendalo yokuqhotsa engeniswe eSouth Korea kunye nengcebiso yabathengisi. Ngelo xesha, wathi olu hlobo lwePan alunazingubo zekhemikhali, kodwa lwaluseneempawu zokungancamathelani. Nangona kunjalo, xa ujonga imiyalelo ngocoselelo, uya kwazi ukuba ukuze ufezekise isiphumo sokunganamatheli embizeni, kuya kufuneka ubushushu obaneleyo beoyile xa upheka. Ngokweemfuno zeshishini, kuya kufuneka ulinde ioyile ukuba ifudumeze kwaye itshaye ngaphambi kokuba ubeke izithako. Kodwa uNks. Wei wathi ngokokwazi kwakhe, ukuba ioyile ishushu ukutshaya kwaye emva koko yosa, ungabi sempilweni. Omnye umthengi, UNks Liu, uchithe phantse i-yuan engama-2000 kwisitya sensimbi esingenasiphelo. Nangona kunjalo, wafumanisa ukuba umaleko ongaphezulu wesikhephe sincinci kakhulu ukuba ungasetyenziswa. Isithsaba sokuhambisa amanzi esiphindaphindwe kabini sinokusetyenziswa njengoluhlu olunye. Abanye abathengi banika ingxelo yokuba iiseti ezibiza kakhulu ze-spatula kunye neepuni akukho lula ukuzisebenzisa ngenxa yobunzima bazo kunye noyilo olungenangqondo. Uninzi lwazo alwenzi nto ngaphandle kwefry spatula kunye necephe.
Ngapha koko, iimbiza neepani kufuneka zisetyenziswe yonke imihla. Ukuziqhelanisa yeyona nto ibalulekileyo. Intatheli yandwendwela imarike kwaye yafumanisa ukuba ixabiso lezinto zokupheka zeemveliso ezaziwayo azibizi. Umzekelo, ipani esetyenziswa ngokuxhaphakileyo, ixabiso lihlala lijikeleze i-yuan eyi-100, ngaphandle kwento yokufaka ipani, i-yuan engaphezulu kwe-200 inokuthengwa, ukuba yintsimbi eqhelekileyo, ipani yentsimbi esulungekisiweyo, nokuba ingaphantsi kwe-100 yuan . Kwaye kukho iseti yomphunga we-stainless steel-layer ezimbini, okwa yi-100 yuan. UNks Wu, ongummi, uthe kudliwanondlebe ukuba umhlobo umnike iseti yeepani zokuloba ezivela kwamanye amazwe, ezazikhangeleka zintle kakhulu, kodwa emva kokuyisebenzisa amatyeli aliqela, wafumanisa ukuba yayihlala incangathi kwaye ingalunganga ukucoca. Kwakulunge ngakumbi ukusebenzisa i-yuan yentsimbi yentsimbi yentsimbi yentsimbi yokutshiza ekhaya. Abathengi abaninzi abanamava afanayo bathi eyona nto ibalulekileyo kukuba izixhobo zokupheka ziyafikeleleka kwaye kulula ukuzisebenzisa, kwaye akukho sidingo sokulandela ngokungakhathali iimveliso eziphezulu.
Ixesha Post: Jul-01-2020